May 2012 | မိုးသကျဦးလှငျ
Ｗｈｏ　ａｍ　Ｉ??　ဆိုလို့ ဂျက်ကီချမ်းကား အကြောင်းပြောမလို့မဟုတ်ပါဘူး. ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါ.။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်လွတ်လက်လွတ်နေနေခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ..။တစ်ပတ်လို့
စိတ်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားပေမယ့်. ၂ပတ်ကျော်သွားပါတယ်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးရင်တော့. ဘာမှ မဖြစ်ပါ
ဘူးလို့ပဲ　ပြောရမှာပါ.။ဒီကြားထဲမှာ　ကျွန်တော့်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့　ဖွဘုတ်ပေါ်သာ
ကြည့်ပါတော့လို့　ပြောရမလားပဲ.။　ကျွန်တော်　နောက်ဆုံးပို့စ်တင်ခဲ့တာ　၁၃　ရက်နေ့ပေါ့.။ဒါပေမယ့်
တကယ်တမ်း　ကိုယ့်ဖာသာရေးဖြစ်ခဲ့တာ　ပုံမှန်အခြေအနေနဲ့စိတ်မလေခင်မှာရေးခဲ့တာက　မေလ　၂　ရက်နေ့ပေါ့ဗျာ.။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာ　ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့　ဒိုင်ယာရီလေးထဲကပြန်
ပြောပြပါ့မယ်.။　ပထမဆုံးပြောပြစရာက..ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာ　၀ိုင်ယာလက်စ်သုံးတဲ့　ဦးကပ်စီးသူ
ငယ်ချင်းတွေရှိတယ်.။သူတို့သုံးတဲ့YOTA လို့ခေါ်တဲ့ Wi-max router က ဗားရှင်းအသစ်ပြောင်းတာကို
လဲဖို့သွားကြတယ်.။မြေအောက်ရထားဘူတာရောက်တော့သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီး အဲ့နားက ပန်းခြံလေးထဲ
ကိုဝင်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတယ်.။နွေဦးပေါက်စ (ဒီပေါက်စကပါလာပြန်ပြီ..ကတောက်..ငါ့နှယ်နော်..) ဆိုတော့.
ပန်းခြံထဲမှာစကိတ်စီးသူက စီး အတွဲလေးတွေနဲ့ထိုင်သူက ထိုင်ပေါ့ဗျာ.။ကျွန်တော်တို့လို ခေါင်းမည်းအာရှသား
ရွှေတစ်စုကတော့ ဖာသိဖာသာ ဟန်ထူးလွင်သီချင်းထဲကလို ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျွန်တော် မဆိုင်သလိုပဲ ပေါ့.။
အဲ့နေ့က ၀ိုင်ယာလက် Router မရပဲနဲ့ နောက်ဆုံးတော့.....
အဲ့တာက တစ်ခု .နောက်တစ်ခုက.. .။ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့တပ်ခွဲက အစ်ကိုတွေဆီကို..သွားတယ်.။
အလည်အပတ်ပေါ့ဗျာ..။ ဟိုရောက်တော့ ညီလေးမပြန်ပါနဲ့.ထမင်းချက်ကျွေးမယ်ဆိုတော့အားနာပြီးနေဖြစ်
သွားပါတယ်. ။ညနေပိုင်းရောက်တော့..အစ်ကိုတွေစကိတ်စီးတော့ စီးတတ်သလားမေးတဲ့အခါ.ကျွန်တော်
စီးချင်စိတ်ပြန်ပေါ်လာတယ်.။ တကယ်တမ်းကျွန်တော်စကိတ်မစီးတာ..၈နှစ်ကျော်၉ နှစ်ထဲမှာရှိပြီ.။၇ တန်း
နှစ်ကနောက်ဆုံးစီးခဲ့တာဆိုတော့. နဲနဲတော့စိမ်းသလိုဖြစ်နေတယ်.။ ဒါပေမယ့်သေချာပြန်စီးကြည့်တော့
လည်း အိုကေပါတယ်.။အဲ့နေ့က မော်စကို မြစ်ကမ်းအထိ ၄ မိုင်လောက် စီးကြတယ်.။ လဲလိုက်သမှ တစ်ဖုန်း
ဖုန်းနဲ့ပဲ.။ကျွန်တော် အဲ့လောက် တာဝေးကိုတစ်ခါမှ မစီးဖူးတာလဲ ပါပါတယ်.။ လူက မရဲပါဘူးဆိုမှ မီးပွိုင့်က
၅ ခါလောက်ဖြတ်ရတာလဲ ပါတာပေါ့.။ :p . ပြောဖို့မေ့သွားတာက.. အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့　ဇာတ်လိုက်
ကျော်ကြီး နောင်တော်ကိုမောင်နှစ်လုံးနဲ့　တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်.။
အမှန်က　အောက်က　ခွေးများနင်းမိရင်ပြဿနာပဲလို့တွေးနေတာ..　ဟီး..။
နောက်တစ်ခုက အမေများနေ့ ကပေါ့..အဲ့နေ့က ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်
တင်ဖြစ်ပါတယ်.။ အဲ့နေ့က. ဆရာမတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံသွားကြတယ်.။ အဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်
ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်.။ ဆရာမတွေက တစ်လမ်းလုံးရှင်းပြ..။ သဘောကောင်းလှချည်လားမှတ်နေတယ်..။
ပြန်လည်းပြန်ရော..။ အဲ့အကြောင်းစာစီစာကုံး ရေးခိုင်းတော့တာပဲ.။ >.<..။ တော်သေးတာပေါ့.. Wiki လေး
လူကောင်သေးပေမယ့်.. ကြောက်ရတဲ့ ဆရာမ အာလျော့နာ..။
တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ သဘောအကျဆုံးအကောင်လေးပါ..။ငယ်ငယ်က Discovery Channel မှာကြည့်ခဲ့ဖူး
တယ်.။ Meerkat ဆိုတဲ့တွင်းအောင်းသတ္တ၀ါလေးပါ.။ တစ်ခြားအကောင်တွေ အစာစားနေချိန် ဆော့ကစား
နေချိန်မှာ တစ်ကောင်ကောင်က အခုလို အလှည့်ကျကင်းစောင့်ကြရပါသတဲ့.။ ..
အပေါ်က ကျားဖြူက ကိုက်မယ့်ပုံမပေါ်ဘူးနော်.။ ချစ်စရာကြီး.. ဟီးဟီး..။ အောက်ကကလေးမလေးကတော့
ပို့စ်လဲရှည်သွားပြီ.။ ပုံတွေက အများကြီးပဲ အားလုံးတင်မပေးနိုင်တာကိုနားလည်ပေးပေါ့ဗျာ.။
နောက်တော့လည်း ဒီလို သွားတဲ့လာတဲ့အခါ Up to date ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါ့မယ်.။ (ပေးပြန်ပြီ ဒီကတိ..)
အခုတစ်လော ဖွဘုတ်ပေါ်မှာပဲ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ရောဂါကို ဖြတ်ပြီး.ဘလော့ဘက်ပြန်လှည့်ပါမယ်.။ ပြီးတော့
နောက်တစ်ပတ်ကျော် လောက်မှာ စာမွဲရှိတဲ့အတွက်.။ ခန နားချင်နားပါဦးမယ်.။ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ
Posted by မိုးသက် at 3:33 PM 17 comments Read more
- ဖန်တီးခဲ့တဲ့. ၊ ဖန်တီးနေဆဲ အရာအားလုံးအတွက်
လောကကြီးကို တာဝန်မကျေမှု အတွက် ခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောပေးပါ....။
- ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ၊ ထမ်းဆောင်နေဆဲ့ ၀တ္တရားအားလုံးအတွက်
- မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ၊ မျှော်လင့်နေဆဲ အိပ်မက်အားလုံးအတွက်
- ငါ့ကိုချစ်ခဲ့သူ ၊ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက်
သူတို့ကို ၀တ္တရားပျက်ကွက်မှုအတွက် ခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောပေးပါ...။
- ငါချစ်ခဲ့တဲ့..၊ ချစ်နေဆဲ.၊ အမြဲချစ်သွားမယ့်..
အမြတ်နိုးဆုံး သူမ အတွက်လည်း...
ဘ၀ တစ်ခုလုံးစာ နှစ်မြုပ်ပြီး...
သူမက ငါ့ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခု ၊ ငါ့ရဲ့ အသက်တစ်ခု ၊ ငါ့ရဲ့ ဘ၀တစ်ခု လို သဘောထားခဲ့တယ်
ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရင်ခုန်သံတိုင်းမှာ...
သူမ သိအောင် ပြောပေးပါ...။
Posted by မိုးသက် at 8:57 AM 11 comments Read more
Mother's Power (အမေ့အားမာန်..) - ဘာသာပြန် (အမေများနေ့ဂုဏ်ပြု ကဗျာလေးပါ..)
* A mother is likeaturbine, creating warmth and power
Running very smoothly for the family every hour
*A mother is likeaseeding machine,
sowing her love.
Nurturing children's knowledge beyond and above.
*A mother is like an artist, paintingapretty scene.
A priceless master piece, created with thought so keen
*A mother is likearailroad or city transit train
Moving to new achievements, more knowledge to attain .
*A mother is likearestaurants,amaster chef to know
Serving scrumptious snacks and meals to family on the go
*A mother is likeamedical team,
doctor and nurse combined.
To held the house hold maladies with chars in mind.
*A mother is likeafashion show,
displaying all the styles.
A glowing jewels of family joy that
shines on life's green isles .
That's "Mon", isn't the "GREAT".
အချိန်တိုင်း ချောမွေ့စွာ လှုပ်ရှားပေးနေတယ်..။
မြင့်မြတ်အသိတရားနဲ့ ဗဟုသုတ တွေရအောင်
တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာ
* အမေဟာ မီးရထားလမ်းတစ်ခု
အိမ်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှဆင်..
(ဂုဏ်သရေ) တောက်ပ စေတယ်..။
“ ကြီးမြတ်သူကြီး ” လို့
(နောင်တော်အစ်ကိုတစ်ဦး ဘာသာပြန်ဆိုထားတာပါ.။ ပြန်လည် တည်းဖြတ်.. Trace လုပ်ခိုင်းပေမယ့် သူ့ရင်ထဲက သဏ္ဍာန်လေးပျောက်သွားမှာစိုးလို့.. စာလုံးပေါင်းကလွဲရင်..မဆိုစလောက်လေးပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်. ။)
မနက်ဖြန် ပြာသိုလပြည့်နေ့မှာကျရောက်မယ့် အမေများနေ့ကို ကြိုဆိုရင်း..ကမ္ဘာပေါ်က အမေဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဥိးကို ရှိခိုးဦးချလိုက်ပါတယ်.။ ကျန်းမာပါစေအမေရေ....။
Posted by မိုးသက် at 1:31 PM5comments Read more
Mother's Power (အမေ့အားမာန်..) - ဘာသာပြန် (အမေများ...